Homeसमाचारमस्तिष्कमा उर्जा संचार गराउन ‘ग्रिन टि’ उपयोगी,अरु फाइदा जान्नुहोस्
November 24, 2020 admin समाचार 7264
‘ग्रिन टि’ निकै च’ल्तीमा छ। स्वास्थ्यप्रति सचेत मध्य’मवर्गीय परिवारमा हरियो पत्तीको चिया खानु एउटा नयाँ फे’सन हुन थालेको छ।व्यस्त जीवनका कारण मानि’सहरु अचेल व्यायाम गर्ने फुर्सदसमेत पाउन छाडेका छन् । व्या’याम गर्ने समय नपाउनेहरु अहिले विभिन्न औषधि वा चियाको सहारा लिएर दुब्ला’उने प्रयास गरिरहेका छन् ।
August 31, 2021 admin समाचार 5590
October 3, 2020 admin समाचार 11161
June 20, 2021 admin समाचार 3675
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (227590)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220518)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220331)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (217457)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (216476)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215169)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (213882)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (213812)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182276)